‘बेकार युद्ध लडिएछ’ युद्धमा लागेको छर्रा अहिले बन्यो क्यान्सर… – Sandesh Munch
भिडन्तमा लागेको घाउ बल्झिएर बन्यो क्यान्सर
कस्तो व्यवस्थाका लागि बन्दुक बोकिएछ ? कसका लागि मर्न र मार्न हिँडिएछ ? अहिले सम्झिँदा पनि छाती पोलेर मात्र आउँछ।
काठमाडौं : सिन्धुपाल्चोक सुनकोसीका नैनबहादुर तामाङ (४२) लाई अस्ति भर्खरजस्तो लाग्छ, अन्यायविरुद्ध लड्न बन्दुक बोक्नुपर्छ भन्ने चेतना आएको। तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले २०५८ मध्य वैशाखमा उनको गाउँमा जनसरकार घोषणा गर्दै थिए। त्यस कार्यक्रममा प्रमुख नेता थिए, अहिलेका सभामुख अग्नि सापकोटाका भाइ देशबन्धु अर्थात् कृष्णप्रसाद सापकोटा। तामाङ त्यही कार्यक्रम हेर्न पुगे। माओवादीको नाराले आकर्षित गर्‍यो। उनलाई लाग्यो, परिवर्तनका लागि बन्दुक बोक्नुपर्ने रहेछ।
कोही पनि दुई चोटी मर्दैन, एकैपटक त हो मान्छे मर्ने। युद्धमा लाग्दा उनको अठोट थियो, कि मृत्यु कि मुक्ति। चैनपुरबाट बन्दीपुरसम्मका मोर्चामा घाइते हुँदासम्म उनले लड्ने हिम्मत हारेनन्। गोली लाग्दा होस् या छर्रा, अस्पताल देखेनन्। देखून् पनि कसरी ? सरकारले माओवादीविरुद्ध कठोर संकटकाल लगाएको थियो, सेना परिचालनसम्मको निर्णय थियो। सुइँको पाए सरकारी नियन्त्रणमा पर्ने डर उत्तिकै थियो। जोखिम मोलेर सहर पसी उपचार गर्नुभन्दा सहयोद्धाको सामान्य औषधोपचारमै उनले आफूलाई फेरि ठीकठाक पारिहाल्थे र अर्काे मोर्चा लड्ने तयारीमा जुटिहाल्थे। आखिर त्यो के–का लागि थियो ? ‘बेकारका लागि।’ उनलाई अहिले यस्तै भान भइरहेको छ। ‘शोषण, उत्पीडनको अन्त्य, न्याय, समानता र स्वतन्त्रता’को नारा ‘खोक्रो’ लाग्न थालेको छ। १० वर्षको भीषण युद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नेताहरू कहाँबाट कहाँ पुगे। तर, तामाङको अवस्था दयनीय बन्दै छ। उनलाई बन्दुक पड्काउन कासन गर्ने नेता नै सरकारमा छन्। राज्यका ‘डाडुपन्यु’ उनै नेताका हातमा छन्। उनीहरूले आफ्नाका लागि त्यसलाई नियमभित्र रहेर होस् वा बाहिर, जसरी पनि चलाएका छन्। तर, तामाङजस्ता नागरिकका लागि राज्यको
‘डाडुपन्यु’ कहिल्यै सहयोगी बनेन। हिजोका उनका आदर्श नेता अहिले पराई लाग्न थालेका छन्।
उनी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न खुमलटार पनि पुगे।
‘जोगबहादुर महरा (प्रमुख स्वकीय सचिव) सरले अध्यक्षसँग भेट गर्ने समय मिलाइदिनु भएन’, उनले भने, ‘खुमलटारमा गएर दिनभर बसें। तर, भेट्न सकिनँ। साहै चित्त दुख्यो, फर्केर आएँ। त्यसपछि गइनँ। यस्तै रहेछन्, हाम्रा नेता अब हाम्रा रहेनछन् भन्ने लाग्यो।’
आफूले आदर्श मानेका दाहालसँग भेट्नै नपाउने, थापाबाट कुनै सहयोग नपाएपछि भने उनलाई अरू नेताप्रति विश्वास लागेन। ‘मुख्य नेताहरूले नै चासो दिन छाडिसकेछन। झन् अरूले के गर्लान् र खोइ ? हामीलाई प्रयोग मात्र गरेका रहेछन्’, उनले भने, ‘त्यसपछि नेताहरूकहाँ धाउन्नै छोडिदिएँ।’
गाउँपालिकाले १६ हजार दियो। लकडाउनका बेला धुलिखेल आएँ। धुलिखेलले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा रिफर गरयो अनि यता आएँ। हिजो के सोचिएको थियो, आज यो हालत भयो। विगतको कुरा सम्झिँदा मन भाँचिएर आउँछ। कुरा गर्न मन लाग्दैन आजभोलि। देशका लागि लडेको मान्छे, अहिले यसरी आफैं लडेर कुजिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा आइयो।
घाउ पाक्यो, गाह्रो भयो भने आउनु नत्र महिनामा एकपटक आउनु भनेका छन्। अहिले पनि एक साता मात्र भयो भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको। यहाँ भाइको डेरामा बसेको छु। यहाँ पनि कतिन्जेल यसरी बस्ने ? के गर्ने मेरो ठेगान छैन। उपचार गर्न पैसो साथमा छैन। गरिबको राज्य व्यवस्था ल्याउन भनेर लडियो तर अझै गरिबको राज्य रहेनछ। राज्यले क्यान्सर, मिर्गौलाजस्ता रोगमा मात्र भए पनि उपचारको व्यवस्था गरिदिएको भए हामीजस्ता गरिबलाई राज्य छ भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। तर नेताहरू फेरिएका रहेछन्, जनता उस्ताको उस्तै छन्। परिवर्तनका लागि के आन्दोलनमा लागिएछ भन्ने लाग्छ। मन दुखिरहन्छ। बूढाबूढी भेटिँदा कहिलेकाहीँ भक्कानिएर रुन्छौं, कस्तो व्यवस्थाका लागि बन्दुक बोकिएछ ? कसका लागि मर्न र मार्न हिँडिएछ ? अहिले सम्झिँदा पनि छाती पोलेर मात्र आउँछ। Source: AnnapurnaPost
Prevसमुदायस्तरमा जाँच गर्न थालेपछि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै
Nextमुस्कुराइराख्ने ५-६ दिनको साक्षात देवी जस्तो नानी वेवारिसी रुपमा